February 2015 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Thiha Htike at 9:26:00 PM 0
Apk ပါ နောက်တော့ နောလိပ်တွေတင်ပေးသွားပါ့မယ် အခုမှစတင်လေ့လာသူတွေအတွက်ပေါ့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ ၁၂၃၄ ပေါ့ အစကနေ လူများတွေပြောတယ် လည်ဘယ်ထိပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ လည်ဘဲအထိ တင်သွားမှာပါ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာသားတွေမဟုတ်တော့ နားမလည်တာရှိရင်သေချာထပ်ဖတ်ပါနားလည်သွားပါ ကွမ်းစားချင်တဲ့သူကိုကွမ်းကျွေးပါ့မယ် ဒါပေမဲ့ ထုံးစပ်နည်းတော့မသင်ပေးပါဘူးဆိုတာ ကွမ်းမှာပါ ဒီမှာလည်းကျွန်တော် လမ်းကြောင်းတွေမပေးပါဘူး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လေ့လာကြည့်ပေါ့ဗျာ Diagram ရေးနေတဲ့ ကျွန်တော့်ဆရာတွေဆိုရင်သင်တန်းမတတ်ဖူးနော် ဒါပေမဲ့ အခု Sharing လုပ်တာကျွန်တော်တတ်လို့မဟုတ်ပါ လိုအပ်နေသူအတွက်ကူညီရုံပါ မြန်မာဆေးဆရာက English ဆေးကိုမသိသလို English ဆေးဆရာက မြန်မာဆေးလို သေချာမသိလောက်ပါဘူးဗျာ.. ကျွန်တော် ဆရာတွေတွေ့ရင် " ဟား .. ဟား..ဟား.." လို့ကျွန်တော်တင်သောပို့စ်တွေကို ရယ်ပါလိမ့်မယ် ။ ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းလေ့လာနေဆဲပါ ဘာမှမတတ်ပါဘူး ဒီအတိုင်းပဲ လိုအပ်မယ်ထင်လို့ Sharing လုပ်ရတာပါခင်ဗျာ.. ဟုတ်ကဲ့ ... ကျွန်တော်က သာမန်Software သမားလေးပါ ခင်ဗျာ...
Email )မအားတဲ့အချိန်ဖုန်းကိုင်မည်မဟုတ်ပါ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်,အကယ်လို့ ဒီိပိုစ်လေးကြောင့်တစ်ခုခုရသွားခဲ့ရင်တော့ ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် Message ပို့ပေးနိုင်တယ်နော်.. :D
Maung Pauk at 2:54:00 PM 1
All Updates Reader ( AUR ) လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ Offline RSS Reader Application ဗားရှင်းသစ်ကို မကြာခင် Update လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်.. စာဖတ်သူများအနေနဲ့ ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း အကြံပြုလွှာများ ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်.. အသစ်ထပ်ထည့်သင့်တဲ့ကဏ္ဍ၊ ဖြုတ်ပစ်စေချင်တဲ့ကဏ္ဍ၊ အသစ်ထည့်ချင်တဲ့ Website သို့မဟုတ် Blog သို့မဟုတ် Facebook Page တွေကိုလည်း ပေးပို့နိုင်ပါတယ်.. အသစ်ထွက်မည့်ဗားရှင်းမှာ ပုံစံ (၂) မျိုးနဲ့လာမှာဖြစ်ပြီး တစ်မျိုးက RSS URL တွေကို ကိုယ်တိုင် ဖြုတ်နိုင် ထည့်နိုင်တဲ့ အမျိုးအစား၊ နောက်တစ်မျိုးကတော့ အရင်သုံးစွဲနေကျ ကဏ္ဍလေးတွေသီးခြားပါဝင်တဲ့အမျိုးအစား တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်.. အမျိုးအစားအလိုက် အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေတော့ ရှိပါတယ်.. ကြော်ငြာကဏ္ဍထည့်သွင်းချင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်..
အကြံပြုလွှာပေးပို့ရမည့်လိပ်စာကတော့ maungpauk@gmail.com, admin@maungpauk.org တို့ဖြစ်ပြီး
ကြော်ငြာကဏ္ဍအတွက်တော့ အထက်ပါ အီးမေးလိပ်စာများအပြင် ဖုန်းနံပတ် 09440225635 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်....
ကြော်ငြာကဏ္ဍမဟုတ်ဘဲ အခြား မေးမြန်းစရာကိစ္စများအတွက် ဖုန်းမဆက်ဘဲ အီးမေးသာ ပေးပို့ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်..
Serviceသမားတွေအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိင်သော Rom များကိုတစုတစည်းတည်းရရှိနိင်တဲ့siteလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်(အလုံသားလက်ဆောင်)
သော်တာဧကရာဇ်(၁၀၆) at 1:37:00 PM 0
ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အလုံသားကနေပြီးတော့userတွေအတွက်ပျင်းရိစရာကောင်းပြီး service သမားတွေ
အတွက်တော့တန်ဖိုးမဖြတ်နိင်တဲ့ website link လေးပေးလိုက်ပါတယ် အဲ့ထဲမှာရှားပါးတဲ့ firmwareတွေကအစအားလုံးနီးပါးရနိင်ပါတယ် တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ ကဲလိုအပ်သူတွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲအောက်မှာဒေါင်းလိုက်ကျပါဗျာ
Download Here ဒီနေရာလေးမှာ သော်တာဧကရာဇ် ဒေါင်းပါ
facebook ;; Ahlone Thar Lay
Maung Pauk at 10:52:00 AM 0
မြန်မာဘာသာနဲ့ ဂျီးမေလ်းကို အသုံးပြုနိုင်ပြီလို့ အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှုတွေ ပေးနေတဲ့ ဂူဂဲလ်က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်က ကြေညာပါတယ်။
ဒီအတွက် ဂျီမေလ်းကို ဘာသာ ၇၄ ခုနဲ့ အသုံးပြုနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူ ၅၃ သန်းရှိတဲ့ မြန်မာက ပွင့်လင်းလာတဲ့ အတွက် အွန်လိုင်းကို လာရောက်တဲ့ လူအရေအတွက်က ပိုမိုများပြားလာတယ်လို့ ဂူဂဲလ် ထုတ်လုပ်ရေး မန်နေဂျာ ဘရိုင်ယန် ခမ်လာက ပြောပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ မြန်မာ လူ ၅ သိန်းခန့် အင်တာနက်ကို အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတော့ ၂.၆ သန်း အထိ တိုးတက်လာတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဘာသာရဲ့ သိမ့်မွေ့မှုကို ဖမ်းဆီးပြီး ဘာသာပြန်တာတွေကို တိကျလိုက်လျော့ညီထွေ ပြည်စုံအောင် လုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၃ ဧပြီကလည်း ဂူဂဲလ် ရှာဖွေရေး အင်ဂျင်ကို မြန်မာနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့သလို မကြာခင်ကလည်း မြန်မာဘာသာနဲ့ ဂူဂဲလ်မှာ ဘာသာပြန်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Khant Phyo Win at 1:19:00 AM 0
တလွဲအသုံးခံရတဲ့ စကားစုတွေမှန်း (ကိုယ်သိပါတယ်)
လင်းလက်လွန်း at 11:27:00 PM 0
Samsung ဖုန်းတွေ အတွက် Pattern Lock ဖြုတ်နည်း (No need Root & No Usb Debug On)
Thiha Htike at 10:37:00 PM 0
တကယ်လို့ ဒီ Tool လေးကို ကွန်ပျူတာမှာ Run မရဖြစ်နေရင် စက်မှာတင်ထားတဲ့ Antivirus ကို ခဏပိတ်ပေးပြီးမှ Run ပါ...။လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒါနဲ့ FacebookA/C မရှိဘူးဆို ကြိတ်မှိတ်ခံစားမနေနဲ့ ဒါကိုနှိပ်လိုက်နော် ... Ok...အဆင်ပြေပါစေ..
ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ ကဗျာလေးများ For ကဗျာချစ်သူများအတွက်...
Thiha Htike at 10:36:00 PM 0
ကျွန်တော်ဟာ အရည်အချင်းရှိပြီး ပါရမီပါသော ကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်တွေကို မိမိတို့ဘ၀မှာ ဖြစ်ချင်တာတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဒသနတွေတင်ပေး၊ကဗျာတွေတင်ပေး၊အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေ
သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေကိုတတ်နိုင်သလောက် online ပေါ်မှာ Sharing လုပ်ပေးပါတယ် အများအတွက် အကျိူးရှိပြီးသူတစ်ပါးမထိခိုက် မိမိရဲ့ပါရမီနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ
ထွက်ပေါ်လာအောင်လုပ်ပေးရုံသက်သက်ပါ ကဲမိတ်ဆွေသင်ကော ဘယ်လိုလဲ မိမိကိုယ်ကို ငါဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာ သေချာစမ်းစစ်ပြီးပြီလား???
(မှတ်ချက်။ ။ ဆရာကြီးတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး ၊ ထုတ်လုပ်သူလဲမဟုတ်သလို ဘာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး ပြီးတော့ တစ်ခုခုလိုခဲ့ရင် ကောင်းစေချင်စိတ်စောနေလို့လို့ နားလည်ပေးပါ နော်
ကူညီရုံသက်သက်ပါ ကဗျာဖြစ်စေ ကျန်သောအကြိုးရှိစေမဲ့စာဖြစ်စေ တင်စေချင်သော သူများမိမိတို့ရဲ့ ကလောင်နာမည်၊နေရပ်၊facebookသုံးပါက Facebook မှာ Firend အဖြစ်လက်ခံဖို့ Link ပေါ့
ကျန်သော Sociel Website များနဲ့ ပေးစေချင်သော အများပါထည့်ပေးပါ...နောက်ပြီး စာအရေးအသားညံခဲ့သသည်ဖြစ်စေ ၊စာလုံးလေးများလိုခဲ့သည်ဖြစ်စေ် ကောင်းစေချင်စိတ်ကြောင့်မို့
နင်နဲ့ပတ်သတ်ရင် ပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ ခံစားချက် တွေအနည်ထိုင်ဖို့
Facebook Accout (YuYu Aung)
ကံကြ မ္မာ ကမျက်နှသာမပေး၍
မေးထားသောသူများအားလုံးအတွက် နဲ့ မမေးထားသောသူများအတွက်...
ဒီကြားထဲဘေကကုန်ပြီဗျာ ၅၀၀ ကျော်ပဲရှိတော့တယ်ဗျာ misscall တောင်အနိုင်နိုင်ပေါ့ ကဲထားလိုက်ပါတော့ တော်ကြာ ဘေအလှူခံနေတယ်လို့ပြောပါအုံးမယ် ကဲမေးထားသောသူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါပြီနော်...
ယခုပို့စ် ကျွန်တော့် ကိုဖုန်းဆက်ပြီးမေးမြန်းထားသော သူများအတွက် သီးသန့်ပေါ့နော်.. ဒါပေမဲ့ မသိသောသူတွေဖတ်နိုင်ပါတယ်.အားလုံးကိုစုစည်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါပြီ .. ဖုန်းဆက်မေးမြန်းထားသောသူများ ထဲမှ မေ့ပြီး မတင်ပေးဖြစ်ခဲ့ရင်ပြန်လည်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်..ပြီးတော့ မအားတဲ့အခါ ၊လိုင်းမကောင်းလို့ဆိုရင် ပို့စ်တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတင်ပေးဖြစ်မယ်မဟုတ်ပါ နားလည်ပေးပါ..ယခုဒီပို့စ်ထဲမှ စာသား၊ပို့များသည် ဒီဆိုဒ်မှာရှိချင်ရှိပါလိမ့်မည် ၊ ဒီဆိုဒ်မှာရေးသော ဘလော့ခ်ဂါတွေရေးရင်ရေးခဲ့ဖူးမယ် ၊ ဒါပေမဲ့နားလည်ပေးပါ ၊ယခုမှစတင် Media Device များကိုသုံးမဲ့ သူများအတွက် သူတို့မရှာဖွေတတ်လို့ တောင်းဆိုလို့တင်ပေးရတာ ဆရာ၊ညီအကိုများနားလည်ပေးကြပါနော်..်ဖုန်းဆက်သူများလည်းအရင်ဆုံးကိုယ့်ဘာသာကိုယ်Try ကြည့်ပါအုံးဗျ ချက်ခြင်းမသိတာရှိမေးမည်ဆိုပဲလုပ်မနေပါနဲ့ ကျွန်တော်လည်းအလုပ်ကတစ်ဖက်မို့ပါ.. အချိူ့သောကိစွ များဟာ ကျွန်တော့် ပါးစပ်နဲ့ဖြေလို့ မရတဲ့ ပြသနာများကိုတော့ ပို့စ်တင်ပေးနေပါတယ် .. မိမိတို့ တင်လိုသော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ များကိုတော့ ကျွန်တော့်ကိုဖုန်းဆက်ပေါ့နော် ..စာသားတွေထဲမှာ ရယ်စရာလေးတွေပါတယ် အဲ့တာကတော့ပို့စ်တွေကရှည်တော့ ပျင်းမှာစိုး ဟာသပြဇာတ်ကို အလကား ခေါ်ထားတာ :P
Facebook ကိုနာမည်ကို အကြာကြီးမဆောင့်ပဲပြင်နည်းပေါ့နော်..
Facebook အသုံးပြုသူ User များအနေနှင့် မိမိ တို့ရဲ့ Profile Name ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ ပြဿနာ အမျိုး မျိုးနဲ့ ရင် ဆိုင် ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ တစ်ချို့ ကို နာမည်ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးမှ မလိုချင်တော့ လို့ နောက် ထပ်နာမည် တစ်မျိုးပြန်ပြောင်းချင်တဲ့အခါ ပြောင်းလို့မရတော့ပဲ ရက်ပေါင်းခြောက်ဆယ် စောင့်ရမယ်လို့ Facebook Policy က ထုတ်ပြန်ရေးသားထားပါတယ်။
အချို့ User တွေကတော့ ရက်ပေါင်း ခြောက်ဆယ် စောင့်ရတာနဲ့ အဆင်ပြေတာရှိသလို အချို့ ကျတော့ လည်း အဆင်မပြေတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေပြေလည်စေဖို့အတွက် နည်းလမ်းလေးတစ်ခု မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ မိမိ ရဲ့ Facebook Profile Name ကိုရက်ပေါင်း ၆၀ စောင့်စ ရာမ လိုပဲ ချက်ချင်း ပြောင်းလဲနည်းပါ။
ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ Porfile Name ကိုပြောင်းလဲရန်အတွက် Facebook ရဲ့ Account Setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။
ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Facebook Profile Name ကိုပြောင်းလဲရန်အတွက် Name ရဲ့ Edit ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အကယ်၍ သင်ဟာ Profile Name ကိုပြောင်းလဲခွင့်ရရှိတဲ့လူဆိုရင် Full Name ကို အလွယ် တကူ ပြောင်းခွင့် ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲခွင့်မရှိတဲ့လူကတော့ Full Name ဆိုတဲ့ text box လေးက မှိန်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ အောက်မှာလည်း သင်ဟာ သင့်ရဲ့ Profile Name ကိုပြောင်း လဲပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက် နောက်ထပ် ရက်ပေါင်း ၆၀ စောင့်ပြီးမှသာ ပြောင်းလဲခွင့်ရရှိမယ် ( " You can't change your name right now because you've already changed it within the last 60 days." ) လို့ရေးသားထားပါတယ်။
ဒီလို ရေးသားထားတဲ့ စာကြောင်းရဲ့ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ Learn more ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုတွေ့  ရပါ လိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ စာသားလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Facebook က သူ့ရဲ့ Policy Rule တွေကို ရှင်ပြထားတဲ့စာတွေကို တွေ့ရပါ လိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ စာသားတွေရဲ့ အောက်နားမှာတော့ သင့်အနေနဲ့ alternate name ကို Profile Name မှာ ထည့်သွင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စာသားဖြစ်တဲ့ (You can also add an alternate name (ex: maiden name, nickname) to your profile. If your first and last name isn’t listed on your account and you’re unable to change it,) ဒီစာသားကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ Let us know ဆိုတဲ့ စာသားလေးလဲ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီ တွေ့ရတဲ့ Let us Know စာသားလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
အဲ့ဒါပြီးရင် Changing Your Name ဆိုတဲ့ Form လေးတစ်ခု ကျလာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ form မှာ ကိုလိုချင်တဲ့ နာမည် First Name , Middle Name , Last Name နဲ့ Pick One ဆိုတဲ့ Choose Box မှာတော့ Other ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
ဒါတွေပြီးရင် သင့်အတွက် အခက်ခဲဆုံး အပိုင်းရောက်လာပါပြီ။ အောက်နားမှာ Your ID ဆိုပြီး Choose Files လေး တစ်ခု တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ နေရာမှာတော့ သင့်ရဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ID တွေလိုအပ်ပြီလို သင်ထင်ကောင်း ထင်နေပါလိမ့်မယ်။ အရမ်း အာရုံမနောက်သွားပါနဲ့။ သင့်ရဲ့ လက်ရှိတင်ထားတဲ့ Porfile Photo ကို သင့်ကွန်ပျူတာ တွင် save လိုက်ပြီး Changing Your Name ဆိုတဲ့ form ရဲ့ Choose Files လေးမှာ ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ ညာဘက်ထောင့်နားက Send ဆိုတဲ့ Button လေးကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ Facebook Profile Name ကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းရရှိတာကို သင်မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မည်။
ဒါကတော့ password ပြောင်းနည်းပါ
Facebook Password Change ချင်တယ်ဆိုရင်တော့....
☻Facebook acc ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်နော်.....
☻Facebook acc ဖွင့်ပြီးရင်တော့....
☻Fb acc Settings ကိုတာလေးကို ၀င်လိုက်နော်.....
☻Account Settings ကိုဝင်ပြီးရင်တော့.....
☻General ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါနော်.......
☻General ဘေးမှာတော့ General Account Settings ရဲ့အောက်မှာတော့....
☻Password ဆိုတာလေးကိုတွေ့မှာပါ တွေ့ရင်တော့ သူဘေးမှာရှိတဲ့ Edit ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ....
☻နှိပ်ပြီးရင်တော့ Current: မှာက အရင် Password အဟောင်းကိုရေးပါ...
☻New: နဲ့ Re-type new: မှာကတော့ ပြောင်းတဲ့ Password ကိုနှစ်ခုကို တူအောင်ရေးပေးလိုက်ပါ....
☻ပြီးရင်တော့ Save Changes ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ........
Facebook A/C ကိုဖျတ်နည်းပေါ့
ဒီမှာ သွားပြီ Submit ကိုနှိပ်ပါ
Gmail password ပြောင်းနည်း
Gmail Password ပြောင်းဖို.ကတော့အရင်ပြောချင်တာကမူလ Password
ကိုသိဖို.လိုပါလိမ့်မယ်။သိမှသာPassword ပြောင်းလို.ရမှာပါ။ပြီးတော့Gmail Mail
မှာ Password ပြောင်းရင် Gtalk မှာ Password လိုက်ပြောင်းတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ.။
Password ပြောင်းရင် အနည်းဆုံး ၈ လုံးရှိရပါလိမ့်မယ်။စလိုက်ရအောင်
အရင်ဦးဆုံးမိမိ Gmail ကိုဝင်လိုက်ပါ။Settings ကိုရှာပါ။တွေ.ပါက ကလစ်နှိပ်ပါ။
General,Accounts,Labels,Filters,Forwarding and POP/IMAP,Web Clips
တွေ.ပါလိမ့်မည်။အဲဒီထဲမှ Accounts ကိုနှိပ်ပါ။ Google Account settings ကိုနှိပ်ပါ။
ထို Webpage ရှိ Change password ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ပေးထာသောမေးခွန်တွေကို
ဖြည့်ပေးပါ။ Current Password တွင်မိမိလက်ရှိအသုံးပြုသော Password ကိုရိုက်ပေးပါ။
ဒုတိယမေးခွန်ကိုဖြေပေးစရာမလိုပါဘူး။ New Password တွင်Password အသစ်ကိုပေးပါ။
အနည်းဆုံး ၈ လုံးရှိရပါလိမ့်မယ်။်Password ရိုက်ပါကဘေးတွင်ရှိသောPassword
strenght တန်းတွင်အစိမ်းရောင်ဖြစ်နေရပါမည်။မဖြစ်ရင်တခြား Password ပြောင်း
ရိုက်ပါ။Confirm new password တွင်New Password တွင်ရိုက်ထားသောPassword
ကိုပြန်ရိုက်ပေးပါ။ Save ကိုနှိပ်ပါ။လက်ရှိ Page ပြောင်းသွာပြီးမူလ Page ရောက်ပါက
Ok ကိုနှိပ်ပါ။ Gmail ကိုအစကနေပြန်ဝင်ကြည့်ပါ။
ဒါကverification error ဖြစ်နေသော သူများအတွက်နည်းတစ်နည်း
ခုဖော်ပြပေးတဲ့ နည်းလမ်းလေးကတော့သိပြီးသား သူငယ်ချင်းများလည်း သိပြီးသားပါ မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ပါ facebook က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရေးနည်းလေး ပြောပြပေးပါဆိုလို့ ရေးဖြစ်တာပါ။ ဒီနည်းလမ်းဟာ verification error တင်မဟုတ်ပဲ build number တူပြီး firmware တင်မရတဲ့ spet2fail အတွက်လည်း အဆင်ပြေပြီးတော့ stock recovery ပြန်တင်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်လည်းအဆင်ပြေစေမှာပါ။နောက်ဆုံးမိမိ လိုသလိုအသုံးချလို့ရနိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးမို့ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ တစ်ခုပဲပြောချင်တာပါ အွန်လိုင်းက လွယ်လွယ်ရတယ် ဆိုပြီးတော့ ဈေးကွက်မဖျက်စီးဖို့ပါပဲ လွယ်လွယ်ရပေမဲ့လည်း တန်ဖိုးထားစေချင်ပါတယ် အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ပုံတွေအများကြီးလုပ် စာတွေ အများကြီးရေးပြီးတင်ပေးထားတာလေးတော့ စာနာထောက်ထားပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ တစ်ခြားဘာကိုမှ မမျှော်လင့်ပါဘူးခင်ဗျာ။လိုအပ်တဲ့ဆော့ဝဲလ်တွေကတော့
huawei firmware spliter
Aio Flasher တွေလိုအပ်ပါတယ်
Unpacker all File Download
မေးထားတဲ့ အကိုက U9200 အတွက် မေးထားလို့ အဲဒါလေးနဲ့ လုပ်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
အရင်ဆုံး Rar ဖိုင်နှစ်ဖိုင်ကို ဖြည်ထားပါ။ ကြည့်ရတာ ရှုပ်ရှက်ခက်မနေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ extract files အနေနဲ့ ဖြည်ပါ။
အရင်ဆုံးကွန်ပျူတာမှာ ActivePerl ကို install လုပ်ထားပါ။
run ပြီးသွားရင်တော့ huawei update unpacker ဖြည်ထားတဲ့ အထဲကို မိမိဖြည်ချင်သော u9200 UPDATE.APP ဖိုင်လေးထည့်ထားလိုက်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ Ext4 unpacker exe . rar ကိုလည်း ဖိုဒါအနေနဲ့ထပ်ဖြည်ထားပါ။
ထည့်လည်းပြီးပြီ ဖြည်လည်းပြီးသွားရင်တော့ split_updata ဆိုတာလေးကို Run ပေးလိုက်ပါ။
update.app ကို unpack လုပ်နေပါလိမ့်မယ် unknow files တွေ အနေနဲ့လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်ဖိုင် က recovery , boot , system ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို Huawei Finder.bat ဖိုင်လေးနဲ့ထပ်ရှာရပါလိမ့်မယ်။
unknown file တွေထဲက ဘယ်ဖိုင်က ဘာလဲဆိုတာကို
သေချာချင်တယ် ဆိုရင်တော့ huawei finder နဲ့ ထပ်ရှာပါ။ သူက ဖိုင်အားလုံး unpack လုပ်ပြီးသွားရင်ပျောက်သွားပါတယ် လုပ်ပြီးသားဖိုင်တွေကို
တော့ output ဖိုဒါလေးနဲ့ထုတ်ပေးထားပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ huaweiFinder.bat ဖိုင်လေးကို run ပေးလိုက်ပါ။ recovery နဲ့boot ဖိုင်နှစ်ဖိုင်နာမည်ရပြီးရင်
press any key to continue ဆိုတဲ့ စာသားပေါ်လာရင် ကီးဘုတ်မှ ကီးတစ်ခုခုကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ သူ့ဖာသာ
ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ် ပြီးရင် output ဖိုဒါထဲကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ recovery.img , boot.img , system.img လေးတွေ တွေ့နေရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီမှာ တစ်ခုပြောချင်တာက ကိုက cwm တင်ထားတယ် မူရင်း recovery ပြန်သွင်းချင်တယ်ဆိုလည်း အဲဒီက recovery.img လည်း flashလို့ရပါတယ်
boot.img ပြန်တင်ချင်လည်း အိုကေပါတယ် နောက်ဆုံး verification error မရှိတဲ့ အလုံး bulid number တူတယ် အလုံးဆို system.img ဖိုင် သုံးဖိုင်လုံးကို
fastboot ဖိုဒါထဲထည့်ပြီး command လိုင်းက နေ flash လို့ရပါတယ်။ နည်းလမ်းကတော့ ဖုန်းကို fastboot mode ၀င်ထားပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ပေါ့နော်
fastboot ဖိုဒါထဲက Fastboot command က flash လုပ်မှာမို့ fastboot ၀င်ထားတာပါ သိပြီးသူများလည်း သိပြီးသားပါ မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် အောက်က
command နဲ့ flash လို့ရပါတယ်။ အရင်ဖုန်း ဖုန်းနဲ့ computer ချိတ်ပြီးသွားရင်တော့ C:\_ အောက်ထဲမှာ fastboot ဖိုဒါထားပါ။ ပြီးရင် အဲဒီ သွင်းချင်တဲ့ သုံးဖိုင်လုံး အဲဒီ ဖိုဒါထဲ ကူးထည့်ထားပါ။
အရင်ဆုံး ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ သိလားဆို တာကို စမ်းဖို့အတွက် command မှာ
fastboot devices လို့ရိုက်ပြီး enter ခေါက်ပါ။ နံပါတ်တွေ ပြရင်သိပါပြီ သိပြီးဆိုနောက် တစ်ကြောင်းပေါ့။
fastboot flash recovery recovery.img enter ပေါ့နော်
fastboot reboot ဆိုရင်တော့ ဖုန်းက ပြန်တတ်လာပါ့လိမ့်မယ် build prop တူပြီး step2fail error တတ်နေတဲ့အလုံးတွေလဲ ဒီနည်းလမ်းနဲ့တင်လို့ရပါတယ်
လေရှည်နေတာနဲ့ build prop ရေးနည်းလမ်း ပြန်ဆက်မယ်နော်
build prop က system.img ထဲမှာ ရှိတာမို့ အဲဒီ system.img ထဲက ထုတ်ယူရပါမယ်။
အရင်ဆုံး Ext4 unpacker ဖိုဒါကိုဖွင့်ပြီး ext4 unpacker android icon နဲ့ ဖိုင်လေးကို Run ပေးပြီး အပေါ်နားက
ဖိုင်ထည့်မဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီး output ဖိုဒါထဲက system.img ကိုရွေးပေးပြီး open နှိပ်လိုက်ပါ။
build.prop ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီး extract ကိုရွေး
ပေးလိုက်ပါ့ သိမ်းဖို့နေရာ မေးရင်တော့ ဖိုင်ရောမှာကြောက်ရင် output ဖိုဒါထဲမှာပဲ ပြန် save လိုက်ပြီး Ext4 unpacker ကို ပိတ်လိုက်ပါ။
output ဖိုဒါထဲကိုသွားကြည့်လိုကပါ။ build.prop ဖိုင်လေး ရောက်နေပါပြီခင်ဗျာ။
လိုချင်တာရပြီဆိုတော့ ပြန်ရေးဖို့ အတွက် Aio Flasher ကို သုံးပါမယ်။
Aio Flasher ဖိုဒါကို ဖွင့်ပြီး အထဲမှာ ပါတဲ့ Android AIO Flasher ကို run ပေးလိုက်ပါ။ အရင်ဆုံး build.prop ရေးရန်အတွက် ထိပ်က
1 Build.prop Editor ကိုရွေးပေးပါ
2 Fom Local File ကိုပြောင်းပေးပါ။
3 Import မှ မိမိထုတ်ယူထားသော output ဖိုဒါထဲမှာ build.prop ဖိုင်အားရွေးပေးပါ။
4 Open in editor ကိုနှိပ်ပါ Build.prop ဖိုင်ထဲပါတာတွေ ပြပေးပါ့လိမ့်မယ်
5 Save Changes ကိုနှိပ်ပါ။ ဖုန်းထဲကို ပြောင်းဖို့အတွက်ပါ။
6 Flash to Device ကိုနှိပ်ပါ။
7 Reboot device ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
အဲဒီမှာ ဖုန်းကို ဘယ် mode မှာ ရေးရမလဲလို့ပြောစရာရှိပါတယ် အဲဒါက ဘယ် mode မှာမဆိုရေးလို့ရပါတယ် Fastboot mode, recovery mode, normal mode ကြိုက်နှစ်သက်ရာနဲ့ရေးပါ။
Verification error အတွက် build.prop ပြန်ရေးပြီးသွားပါပြီဖြစ်လို့ အဲဒီ Build.prop ထုတ်ထားတဲ့ မူရင်း dload ဖိုင်နဲ့ ပဲတင်လိုက်ပါ။ အားလုံးအိုကေသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါနဲ့ရေးချင်ဘူးဆိုလည်း ခွဲ
ထုတ်ထားတဲ့အထဲက system,recovery,boot ဖိုင်သုံးဖိုင်ကိုပြန် flash ပေးလည်းရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျန်တာတွေကတော့ လိုသလိုသာ အသုံးချလို့ရပါပြီခင်ဗျာ ။လက်လည်းညောင်းသွားပြီ
ဒီလောက်ဆိုသူငယ်ချင်းအားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒါက Xiaomi firmware လိုချင်သူများအတွက်
ဒါက I Cloud ဖြည်ချင်သူများအတွက် အသိတစ်ယောက်ဖုန်းနံပါတ်
hone ipad icloud ဖြေပေးသည်
မေးထားတာများ မေ့ကျန်ခဲ့ပါက ဖုန်းဆက်ပေးပါ ဆက်လက်ပြီးတင်ပေးပါ့မယ်
Maung Pauk at 11:09:00 AM 0
CCleaner v5.03.5128 Pro Full : 5.07 Mb
CCleaner ကိုတော့ Windows Computer သမားတွေသိကြမှာပါ.. ကွန်ပျူတာမှာ ကိုယ်သုံးခဲ့သမျ အမှိုက်တွေကို ရှင်းလင်းပေးတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ software တွေ Run တယ်၊ အင်တာနက် Browser တွေကို run ပြီး အင်တာနက်သုံးတယ်.. အဲဒီအချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Cookie, temp, Cache , History စတဲ့ မလိုအပ်တဲ့အမှိုက်ဖိုင်တွေကို ရှင်းပေးပါတယ်.. ပြီးတော့ CPU နဲ့ Memory တို့အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချပေးပြီး ကွန်ပျူတာ မြန်ဆန်မှုကိုလည်း အထောက်အကူပြုပါတယ်.. ခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့ နောက်ဆုံးထွက် CCleaner v5.03.5128 နဲ့ ဘယ် CCleaner v5 ဘယ်ဗားရှင်းကိုမဆို Pro Full Version ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Key တွေဖြစ်ပါတယ်..
CCleaner v5 အထက်တွေကို ဒေါင်းပါ.. ကျွန်တော် အောက်ဆုံးမှာ နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို တင်ပေးထားပါတယ်..
CCleaner ကို Run ပါ.. Options->About ကိုနှိပ်ပါ.. Upgrade To Pro Button ကိုနှိပ်ပြီး ဒေါင်းထားတဲ့ထဲက Username နဲ့ Key ကိုဖြည့်လိုက်ပါ..
Register ကိုနှိပ်လိုက်ပါ.. သင့်ရဲ့ Free Version ဟာ Pro Version အဖြစ် လန်းနေပါပြီ..
( CCleaner ကိုတော့ Windows Computer သမားတှသေိကွမှာပါ.. ကှနျပြူတာမှာ ကိုယျသုံးခဲ့သမြ အမှိုကျတှကေို ရှငျးလငျးပေးတဲ့ Software ဖွဈပါတယျ.. ကြှနျတျောတို့ software တှေ Run တယျ၊ အငျတာနကျ Browser တှကေို run ပွီး အငျတာနကျသုံးတယျ.. အဲဒီအခြိနျမှာ ဖွဈပျေါလာတဲ့ Cookie, temp, Cache , History စတဲ့ မလိုအပျတဲ့အမှိုကျဖိုငျတှကေို ရှငျးပေးပါတယျ.. ပွီးတော့ CPU နဲ့ Memory တို့အသုံးပွုမှုကို လြှော့ခပြေးပွီး ကှနျပြူတာ မွနျဆနျမှုကိုလညျး အထောကျအကူပွုပါတယျ.. ခုတငျပေးလိုကျတာကတော့ နောကျဆုံးထှကျ CCleaner v5.03.5128 နဲ့ ဘယျ CCleaner v5 ဘယျဗားရှငျးကိုမဆို Pro Full Version ဖွဈအောငျ လုပျပေးနိုငျတဲ့ Key တှဖွေဈပါတယျ..
CCleaner v5 အထကျတှကေို ဒေါငျးပါ.. ကြှနျတျော အောကျဆုံးမှာ နောကျဆုံးထှကျဗားရှငျးကို တငျပေးထားပါတယျ..
CCleaner ကို Run ပါ.. Options->About ကိုနှိပျပါ.. Upgrade To Pro Button ကိုနှိပျပွီး ဒေါငျးထားတဲ့ထဲက Username နဲ့ Key ကိုဖွညျ့လိုကျပါ..
Register ကိုနှိပျလိုကျပါ.. သငျ့ရဲ့ Free Version ဟာ Pro Version အဖွဈ လနျးနပေါပွီ.. )
Less Errors & Crashes- CCleaner’s patented registry cleaner clears out this clutter to make your PCmore stable.
Disconnect Ur Internet Connection (Important: Otherwise keys will not work)
Go to Options->About And Click Upgrade To Pro Button
Enter Given Name And Serial Key you've downloaded
Click Register Button ... Done!Enjoy
CCleaner v5.03.5128 Pro Setup : 5.07 Mb
Mediafire 1 Download Links
CCleaner v5 Pro Username and Key : txt